Madaxweynihii Hore ee Galmudug oo war kasoo saaray Xaalada Dhuusamareeb – Idil News
Madaxweynihii Hore ee Galmudug oo war kasoo saaray Xaalada Dhuusamareeb
Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa uu baaq ka soo saaray xaalada Galmudug oo haatan mareysa meel xasaasi ah.
Guuleed ayaa waxaa uu sheegay in dadka Reer Galmudug ay kasoo daaleen colaad iyo isfaham la’aan ka dhex-jirta , isla markaana xilligaan aysan u baahneyn colaad.
“Waxaan shaki ku jirin in colaad iyo is faham la,aan ay ka soo daaleen deegaanada Galmudug oo aysan u baahneyn colaad iyo dagaalo kale oo dhiig ku daato,waxaana dadka reer Galmudug ay ka reebeen asaagooda dowlad gobaleedyada kale ayuu yiri”C/Kariin Guuleed.
In labada dhinac ay joojiyaan gulufka colaadeed iyo gacan ka hadalka, waxii is faham la,aan ahna lagu xaliyo is faham iyo wadahal.
Dowladda waxaan si gaar ah ugu baaqayaa inay ixtiraamto haddii ay jiraan wax heshiis ah oo ay la gashay culumada Ahlu sunna, tixgalisana dowrkii ay ku lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab iyo difaaca deeganadaas.